DEG DEG: Kala carar ka dhacay xarunta aqalka hoose oo farmaajo uu ku sugnaay kadib markii dagaal culus uu banaanka ku dhexmaray ciidamo ka…. – Kismaayo24 News Agency
DEG DEG: Kala carar ka dhacay xarunta aqalka hoose oo farmaajo uu ku sugnaay kadib markii dagaal culus uu banaanka ku dhexmaray ciidamo ka….
by Tifaftiraha K24 15th May 2017 040
Warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayan is-rasaaseeyn cawada fiidkii dhexmartay ciidamo ka tirsan NISA iyo ciidamada ilaalada madaxtooyada villa soomalia.
Is-rasaaseynta ayaa waxa ay ka dhacday agagaarka xarunta aqalka hoose ee dagmada xamarweyne xili halkaasi ay ka socotay xaflad balaaran oo lagu xusaayo maalinta dhalinyarada soomaliyeed ee 15-ka may.
Is rasaaseynta ayaa timid, kaddib markii uu muran soo kala dhex galay labada Ilaalo, waxaana Ilaalada Madaxtooyada oo sugeysay ammaanka xarunta ay u diideen Taliyaha Nabadsugida in gaarigiisa uu gudaha galo.
Ciidanka nabad sugida ee uu watay taliyaha NISA gobolka banaadir ayaa ka dhago adeegay in ay qaataan amarka ciidanka ilaalada madaxtooyada oo sugaayay amniga xarunta aqalka hoose oo madaxweyne farmaajo uu ka qeyb gali lahaay munaasbaadda 15-ka may.
Inta la xaqiijiyay laba askari oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa ku geeriyootay is-rasaaseynta halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba askari kale waxaana xaaladda ay noqotay mid baqdin ku beertay dadkii ku sugnaay xarunta aqalka dowladda hoose oo moodaayay in dagaal uu goobta kusoo wajahanyahay.
Kala carar ayaa ka dhacay gudaha xarunta dowladda hoose oo munaasbadda 15-ka may ay ka socotay balse markii dambe waxaa la xaliyay murankii labada ciidan soo kala dhexgalay waxaana intaa kadib dib u bilowday munaasbadda.
Ma ahan markii ugu horeysay oo is-rasaaseyn ay dhexmarto ciidamo dowladda ka wada tirsan oo kala shaki iyo kala amar qaadasho la’aan ay soo kala dhexgashay waxaana weli maanka shacabka soomaliyeed ka guuxaya dhacdadii dhawaan ciidamo ilaalo u ahaay hanti-dhowrihii qaranka ay agagaarka madaxtooyada ku dileen allaha ha u naxariistee wasiirkii wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska cabaas c/llahi siraaji.
TOP NEWS: C/rashiid xidig oo guddoomiye looga dhigay madashii ugu horeysay ee mucaarad ku ah dowladda farmaajo
Akhriso: Waa maxay sababta ay weeraradu u sii badanayaan, siddeese ayey Beesha Caalamku uga fal celin kartaa?
Top News: Maxaadan Ogeyn oo Muhiim ah oo saakey Cadaado ka socda!!!
admin 27th June 2015 27th August 2015
War Cusub: Howlgalka xasilinta muqdisho oo weji kale yeeshtay iyo baaritaan aan horay loo arag oo muqdisho ka bilowday
Safarka madaxdii hore ee Qaranka Somaliya ee magaalada Baladweyne oo dib-u-dhac ku yimid.